लुम्बिनीमा किन हारे कांग्रेस, माओवादी ? - Naya Patrika
लुम्बिनीमा किन हारे कांग्रेस, माओवादी ?
निर्वाचनका खेल अनेक हुन्छन् । तर, निर्वाचन जित्न खेल मात्रै खेलेर हुँदैन । निर्वाचनमा सफल हुनका लागि राजनीतिक दलका लागि नीति सिद्धान्त, संगठनदेखि जनताको मनसमेत जित्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनको चहलपहल सुरु भएपछि दलहरूका विगतका कार्यशैली, उसले देश र जनताका लागि विगतमा गरेका काम र आगामी कार्यदिशाको विश्लेषण गर्ने हो भने कुन दलले जित्ला भन्ने अनुमान गर्न सकिने अवस्था हुन्छ । यसपटक बुटवलसहित लुम्बिनीका विभिन्न स्थानीय तहका निर्वाचन चर्चित रहे । कांग्रेस–माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धनले ठाउँ–ठाउँका निर्वाचन रोमाञ्चक बने । गठबन्धन गर्दा पनि उनीहरूले सोचेजसरी निर्वाचन जित्न नसक्नुका आधार यस्ता थिए:
चुनावी खेलका लागि संगठन दरिलो चाहिन्छ । चुनावी एजेन्डा र विगतमा खेलेका भूमिकाका कारण बुटवलसहितका केही स्थानमा एमालेको जित सहज देखिएको थियो । माओवादी सांगठनिक हिसाबले भताभुंग अवस्थामा थियो । कांग्रेस परम्परादेखि जे छ, त्यही अवस्थामा थियो । माओवादीका केही इमानदार कार्यकर्ता पाखा लागेको अवस्था, भागबन्डामा केही पाइन्छ कि भनी कुरेर बस्ने एउटा जमात र इमानदारीपूर्वक खटिनेबीचको अनमेलको परिणाम माओवादीलाई निर्वाचन जित्न कठिन थियो ।
माओवादी हारको कारण
लुम्बिनीमा माओवादीको केही प्रभाव अर्घाखाँचीमा रहेजस्तो लाग्थ्यो, त्यो पनि टोपबहादुर रायमाझीका कारणले । जिल्लाको विकासमा गरेको पहलले टोपबहादुरले केही गर्छन् भनेर विश्वास गर्नेहरूका कारण त्यहाँ केही मजबुत देखिन्थ्यो । अन्यत्र खासै राम्रो अवस्था थिएन । रुपन्देहीमा एउटा तहमा जित हासिल गरे पनि अन्यत्रको चुनावी परिणामले पनि माओवादी कस्तो अवस्थामा रहेछ भन्ने देखायो । तालमेलका कारण अर्घाखाँची र गुल्मीमा केही सफलता हात लागे पनि अन्यत्र भने तालमेल भएका धेरै स्थानमा समेत जित्न गाह्रो देखियो । यसले गर्दा अब माओवादीलाई संगठन निर्माणमा जुट्दै जनमत आफूतर्फ आकर्षण गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । पार्टीलाई मजबुत बनाउन कमीकमजोरी नसच्याउने हो भने माओवादीलाई आगामी निर्वाचनहरूमा अझ बढी नोक्सान हुने खतरा छ ।
कांग्रेस पराजयका कारण
कांग्रेस पराजयका कारण धेरै छन् । केही कारण नेतृत्वले समेत स्विकार्ने खालका छन् भने केही नेतृत्वलाई पाच्य नहुने खालका पनि छन् । नेपाली राजनीतिमा निकै महत्वपूर्ण इतिहास बोकेको पार्टी कांग्रेस झन् पछि झन् कमजोर बन्दै जानुका पछाडिका केही कारण यस्ता छन् :
कांग्रेस संगठन निर्माणमा लागेको पाइँदैन । बाबुबाजे कांग्रेस, हामी पनि कांग्रेस भन्दै चल्दै आएको पार्टी हो यो । संगठन निर्माण गर्ने युवालाई आकर्षण गर्ने खालको गतिविधि कांग्रेसमा खासै पाइँदैन । समयसापेक्ष नेतृत्व हाँक्ने, संगठन मजबुत पार्ने र गतिविधि जारी राख्ने कांग्रेसले प्रयास गरेकै पाइँदैन । महाधिवेशनका वेला चहलपहल हुने कांग्रेसमा निर्वाचनका वेला मात्रै तात्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । क्रियाशील सदस्यलाई परिचालन गर्ने शैली कांग्रेसमा देखिँदैन ।
टिकट वितरणमा कमजोरी
कांग्रेसले निर्वाचन हार्नुमा टिकट वितरण अर्थात् उम्मेदवार छनोटमा पनि कमजोरी देखियो । लुम्बिनी क्षेत्रमा हेर्ने हो भने बुटवल र देवदहमा मेयरका उम्मेदवारमा कांग्रेसले निकै उपयुक्त व्यक्ति छनोट गरेको पाइयो । तर, अन्यत्र हेर्दा भने उम्मेदवार छनोटमा व्यापक असन्तुष्टि देखियो । यसको असर निर्वाचनमा पर्यो ।
कांग्रेसले निर्वाचन प्रचार–प्रसार र एजेन्डाका हिसाबले विगतमा भन्दा धेरै सुधार गरेको पाइए पनि आफ्ना एजेन्डा मतदातालाई बुझाउन सकेजस्तो लागेन । कांग्रेसले प्रचार शैलीमा अझ बढी सुधार गर्नुपर्ने देखियो ।
विगतका कार्यशैलीले पारेको असर
यसपटकको निर्वाचनमा कांग्रेसले पराजय भोग्नुको मुख्य कारणमा विगतका कार्यशैली पनि जिम्मेवार छन् । लुम्बिनीका सन्दर्भमा पनि ती कार्यशैलीले धेरै प्रभाव पारेको पाइन्छ । के हुन् त त्यस्ता कार्यशैली ?
प्रदेश टुक्राउने प्रस्ताव र आन्दोलन
मधेसकेन्द्रित केही दलका माग सम्बोधन गर्न भन्दै प्रदेश टुक्र्याउने गरी ल्याइएको प्रस्तावलाई राष्ट्रियतासँग जोडेर व्यापक विरोध भएपछि यसले मुलुकभर नयाँ खालको जनमत सिर्जना गर्यो । तराईलाई पहाडबाट अलग गरी प्रदेश बनाउने प्रस्तावविरुद्ध प्रस्तावक दलकै नेताहरू सडकमा उत्रिए । त्यसले गर्दा प्रस्ताव ल्याउने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रविरुद्ध जनमत बढ्यो । सो जनमतको सम्मानमा कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारी, माओवादी केन्द्रका नेता टोपबहादुर रायमाझी खुलेर सडकमा आए । यस्तो अवस्थामा ती दलले ती क्षेत्रका जनताको जनभावना बुझेनन् र त्यसको असर निर्वाचनमा देखियो ।
महानिरीक्षक नियुक्ति र महाअभियोग प्रस्ताव
कांग्रेस नेतृत्वले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरणमा खेलेको भूमिका पनि जनताले पचाउन सकेनन् । ठाडो हस्तक्षेपकारी भूमिकाले प्रहरी संगठन मजबुत नहुने, लगनशील भएर काम गर्नेभन्दा नेताको चाकडी गरे बढुवा हुन्छ भन्ने खालको सन्देश दिने कार्यशैलीलाई पचाउन सकेनन् । त्यस्तै, सोही प्रकरणमा जोडिएर प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्ने शैलीको पनि मतदाताले विरोध गरेको हुनुपर्छ । नेतृत्वको सन्की व्यवहारको परिणाम निर्वाचनमा देखिएको हुनुपर्छ ।